Matipi ekupona telecommuting | Bezzia
Matipi ekupona telecommuting
Maria vazquez | 15/09/2021 10:00 | Executive mukadzi
Denda rakachinja maitiro edu mazhinji. Panguva yekuvharirwa vazhinji venyu maifanira kushanda kubva kumba uye ndine chokwadi chekuti hamusi mose muchave nedzenyu kuhofisi kana izvi zvapera. Ndosaka takafunga kuti vamwe matipi ekupona teleworking zvinogona kubatsira kwauri.
Teleworking ine zvazvakanakira isu tese tinokwanisa kuona: isu tinochengetedza parwendo uye tinonakidzwa nekuwedzera nguva kuchinjika. Nekudaro, isu chete isu tanga tiri telecommuting kwemakore isu tinoziva zvakare matambudziko avo. Isu takazvionera uye takawana maturusi anobatsira chaizvo kuzvikunda.
1 Gadza miganho kuzuva rebasa
2 Gadzira anoshanda "mode"
3 Dzidzisa mhuri
4 Ronga purogiramu yako
5 Buda mumba
Gadza miganho kuzuva rebasa
Dzidza kushandisa nguva ndiyo kiyi kana telecommuting. Ichokwadi chekuve nenguva yakakura yekuchinjika uye hofisi yekumba inogona kutikurudzira kuti tiwedzere maawa edu ekushanda, kungave nekuda kwekuverengera, kana nekuti kana basa rapera tinoedzwa kuramba tichipindura maemail.
Isa miganho pamaawa edu ekushanda pamba zvakakosha kuti zuva redu risave nemaawa makumi maviri nemana. Kana vakasaseta purogiramu yako kubva kubasa asi vakaseta zvinangwa, regedza maawa ako. Sarudza kubva panguva ipi uye nguva ipi yaunoenda kubasa uye kana iwe kuenda kunozorora. Kana iwe uchida kuve unogadzira uye chengetedza muyero pakati pebasa rako uye hupenyu hwemhuri, iwe unofanirwa kudzidza kudzika pabasa uye kuremekedza ako maawa ekuzorora.
Gadzira anoshanda "mode"
Kana munhu akatanga kufonera, muyedzo unokonzeresa kuti munhu arasikirwe neicho chidimbu chekupfeka kuenda kubasa. Kazhinji kukanganisa kwekutanga kunobatanidza vamwe vazhinji. Uye ndizvozvo kuti urarame teleworking ndiyo kiyi yekuisa tsika dzinotiita pinda basa modhi.
Kusiyanisa basa modhi kubva kumhuri modhi chakakosha kuti musoro wedu ushande nemazvo. Zvakare kudzidzisa mhuri yedu, kana tiinayo, yekuti inofanirwa riini uye haifanire kutikanganisa. Sarudza nzvimbo yekushandira Izvo zvaunoshandisa chete kana iwe uchinge uchishanda uye kupfeka sekunge chero munhu aigona kuoneka pamba pako chero nguva. Chengetedza basa rako sekureba sekudikanwa uye wozokanganwa nezvenzvimbo iyoyo kana kuunganidza zvekushandisa zvako muwadhiropu uye uzviite wakasununguka.
Kana pasina munhu pamba akamboshanda pafoni kare, mhuri yese inomanikidzwa kutora maitiro matsva. Uye shanduko dzese mutsika nemaitiro inoda nguva yekuchinjika. Kutaura nemhuri yedu, tichitsanangura masisitimu edu uye kuti kunyangwe iwe uri kumba haugone kuwanikwa zvizere kusvikira kupera kwezuva rako kiyi kune kutanga kwese kwakanaka.
Muedzo Ichakoka mhuri yako kuti ikukanganise mazuva ekutanga iwe uchishanda uye iwe kuti uite kumabasa epamba anogona kumirira kana kunakidzwa nezvimwe zvinofadza zvausingakwanise kuwana muhofisi. Izvo zvine musoro kutsauswa mukati memavhiki ekutanga, saka panguva iyoyo yenguva zvakatonyanya kukosha kuti iwe uve wakasimba uye kuti kana uine mumwe munhu pamba iwe uchishanda vanokwanisa kukuyambira iwe paunokanganiswa, kubatana. Kana mese mangojaira uye iyo nyowani maitiro akaiswa mukati, zvese zvichave nyore uye iwe unogona kuve unochinjika.
Ronga purogiramu yako
Kana iwe ukatakura ajenda pawakaenda kuhofisi, wadii kumira izvozvi? Ronga purogiramu yako sezvawakaita kare uye woongorora mabasa acho mangwanani ega ega, uchiisa pamberi penguva izvo izvo zvakakosha zvikuru. Nyora pasi kubva panguva ipi kusvika panguva ipi yauchashanda, inguvai yauchazodya panguva yekudya kwemasikati uchidya uye uchizorora ... Unogona kuzviita uchishandisa pepa pepa, karenda yeGoogle kana zvishandiso zviri nyore uye zvine hungwaru seTodoist.
Kana isu tichitaurisa, isu tinorasikirwa neruzhinji divi rekuenda kuhofisi, kutaura nevatinoshanda navo kana kunwa kofi navo munzira yekubuda. Inertia, uyezve, inogona kutimanikidza kuti tigare kumba mushure mebasa uye kuramba kuchave kwakakosha kuti tirarame teleworking. Paunoshandisa telework zvakanyanya kukosha kana zvichibvira sangana neshamwari, tora chikamu mumutambo wechikwata, enda kunodya kana kuenda parwendo rwevhiki ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Executive mukadzi » Matipi ekupona telecommuting
Mashandisiro ekutsvagisa zvinoenderana nechiso chako
Chii chinonzi bonde positivism